घरमा घडी कहा राख्नु भएको छ ? यमराजको दिशामा त छैन ? - Aarthiknews
एजेन्सी । वास्तु शास्त्रका अनुसार घरमा राखिएको सबै सामानले त्यस घरका मानिसहरूलाई असर गर्छ । घरको सबै सामान वास्तुसँग सम्बन्धित छ । त्यसमध्ये घडी पनि एक हो । घडी भाग्य संग नजिकबाट सम्बन्धित रहेको वास्तुले बताएको छ । वास्तुका अनुसार घरमा एउटा घडी राख्नुले भाग्यउदय हुने विस्वास गरिन्छ । यदि घडीले एकै साथ घडीको दिशाले नराम्रो भाग्य पनि बढाउन सक्छ ।
घडीले मानिसको समय राम्रो र नराम्रो बनाउन सक्छ । यदि घडी तपाईंको घरको गलत स्थानमा गरिएको छ भने, तपाईंले लगातार कष्ट भोग्नु पर्ने हुन सक्छ । हामीलाई पण्डितबाट थाहा पाउनुहोस घरको कुन दिशामा घडी राख्नुपर्छ र कसरी वास्तु मार्फत आफ्नो भाग्य बदल्न सकिन्छ ।
कुनै पनि फेटेको वा बन्द घडी घरमा राख्नु हुँदैन। फुटेका घडीहरू घरमा राखे घरबाट सकारात्मक उर्जा हराउँछ र नकारात्मक उर्जा बसी रहन्छ भन्ने वास्तुले भनेको छ । घरमा नकारात्मक उर्जा बढेको कारण घरका मानिसका कामहरु बिग्रन थाल्छन्।
घडी कहिल्यै घरको दक्षिण दिशामा राख्नु गर्नु हुँदैन । दक्षिण दिशालाई यमको दिशा भनिन्छ । दक्षिणी दिशामा घडी राखिए यमले आफ्नो समय देखाउन शुरू गर्दछन् भन्ने विस्वास गरिएको छ । त्यसकारण कहिल्यै दक्षिण दिशामा घडी नराख्नु होस । यस दिशामा घडी राख्दा जीवनमा धेरै समस्या आउने विश्वास गरिएको छ । यस दिशामा एक घडी राख्दा जीवनमा प्रगति रोकिन्छ ।
दक्षिणी दिशामा घडी राख्नु भनेको प्रगतिको बाटोमा अबरोध ल्याउनु जस्तै हो । यो दिशा घडी राखिएमा घरको मुख्या मानिसकोे लागी हानिकारक हुनसक्छ । घरको ढोकामा कहिल्यै घडी नराख्नुहोस् । मुख्य ढोकामाथि घडी राख्नाले घरमा तनाव बढ्छ । घरको मुख्य ढोका खोल्ने र बन्द गर्ने क्रम रहिरहन्छ । त्यसैले यो भनिन्छ तपाईंको ढोका बन्द गर्दा तपाईंको समय रोकिन्छ । घरको ढोकामा घडी राखेर, घर बाहिर जाँदा नकारात्मक उर्जाले तपाईंलाई असर सक्छ । यस कारणले गर्दा, तपाईले धेरै समस्याहरू सामना गर्नुपर्नेछ ।
घरको पश्चिम दिशामा पनि कहिले घढी नराख्नुहोस्। जुन दिशामा घाम अस्ताउँछ । पश्चिममा घडी राख्योभने तपाईंको समय पनि पश्चिममा डुब्छ । यस कारणले विवाहित मानिसहरुमा पनि नराम्रो समय हुनसक्छ । समयलाई काल पनि भनिन्छ र पश्चिम दिशा कालको दिशा हो । त्यसकारण कसैले पनि कहिल्यै पनि यस दिशमा घडि सेट गर्नु हुँदैन ।
घरमा कहिले पनि स्क्वायर घडी नराख्नुहोस् । जहिले पनि गोलो वा गोलाकार आकारको घडी राख्नुहोस् किनभने हाम्रो पृथ्वी गोलो छ र घुमाउने समय पनि गोल नै छ । कालो रंगको डायलवाला घडी कहिल्यै प्रयोग नगर्नुहोस् । रातो, पहेंलो, सेतो र सुनौलो रंगमा राख्नुहोस् । घडीहरू सँधै कोमल लुक्स भएका डिजाइन भएका राख्न वास्तुशास्त्रले सुझाव दिन्छ ।
घडी सधैं घरको पूर्व वा उत्तर दिशामा राखिएको हुनुपर्दछ । पूर्व दिशामा राखिएको घडीले घरको वातावरण रमणीय र मायालु बनाउने मानिन्छ । उत्तर दिशामा रहेको घडीले घरका सदस्यहरूलाई प्रगति गर्न नयाँ अवसरहरू प्रदान गर्ने विश्वास गरिन्छ ।